Kenya oo laba jibbaartay xasuuqa shacabka Jubbooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo laba jibbaartay xasuuqa shacabka Jubbooyinka
Askarta Kenya ee ku sugan dalka waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 4,000, kuwaasoo tacadiyo kala duwan lagu eedeeyay inay ka geysteen gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
RAAS-GAMBOONI, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ee qeybta ka ah Howlgalka Nabad ilaalinta Africa ee AMISOM, ay dad shacab ah dil iyo dhaawac ugu geysteen degaanka Raas-gambooni.
Carab Qoriyow, oo ka mid aha dadka degaanka ayay toogasho ku dileen ciidanka KDF, halka ay ugu yaraan laba kalana dhaawac halis ah gaarsiiyeen.
Sidoo kale, wararka ka imaanaya Raas-gambooni, ayaa tibaaxaya in ku dhawad 50 neef oo lo’ ah ay ku laayeen tuulooyin hoos taga degaannada dhaca xuduudda labada dal.
Todobaadkii hore, cabsida dadka shacbaka ah ayaa siyaadday kadib, markii Maxakamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ay muranka ka saartay badda Soomaaliya ee Kenya dooneysay in ay boobto.
Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, ayaa la dhibaatoonayay gabood-fallada, ciidanka Kenya tan iyo 2011-kii markaas oo ciidanka difaaca Kenya lagu daray AMISOM.
Diyaaradaha Kenya ayaa duqeymo shacabka lala beegsanayo ka fuliya xuduudda, waxayna xilliyo kala duwan burburiyen goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin xarumo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud.
Xiriirka Diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa caadi ku soo laabtay dhawaan, kadib markii Farmaajo uu muddo ku rafanayay xiriirka dalalka dariska ah.